I-Flathead Lakefront Hideaway kwi-North Shore
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguCheryl
Indawo yokufihla intloko yaseFlathead Lake ngaphambili. Bukela ukuphuma kwelanga phezu kwechibi kunye neentaba ezisuka kweli khaya lilungele usapho. Le Khabhinethi ikwiN. ekupheleni kwechibi laseFlathead nokufikelela lula eLakeside, Kalispell, Whitefish, Big Fork, Somers kunye nemizuzu nje engama-45 ukusuka ekungeneni kweGlacier Park. Ikhitshi egcwele ngokupheleleyo, igrill yeBBQ, iwasha, isomisi, iWIFI, iphenyane lababolekisa ngemali eli khaya yinkampu egqibeleleyo yokuhlola intle yasentla ntshona yeMontana.
Balekela kweli khaya liphambi kwechibi kwiLake laseFlathead. Ikhaya linombono omangalisayo weLake kunye neeNtaba zeRocky. Gxila kwi-tub eshushu, i-Bar-B-Q kwidesika, dlala emanzini kwaye wonwabele umlilo ecaleni kwechibi lomlilo.
68 iinyawo zolwandle lwakho lwabucala. Ungahamba ngesikhephe, uqubhe, uhambe ngesikhephe okanye ulobe kanye elunxwemeni nakwidokhi. Kukho ukuphakamisa isikhephe esigqunyiweyo esinokubamba isikhephe ukuya kuthi ga kwi-2500 yeeponti. Itafile yepiknikhi, izitulo zegumbi lokuphumla kunye nomngxuma womlilo zisecaleni lamanzi ukuze uphumle kwaye uyonwabele. Umbolekisi wephenyane elunxwemeni ukuze uyisebenzise. Nceda uze nezakho iinkuni.
Ngaba ufuna ukusebenza okanye ukuya esikolweni ukude? Ikhaya linesantya esiphezulu se-intanethi, i-wifi kunye neendawo ezahlukeneyo zokusebenza. Kwaye yeyona ndawo ifanelekileyo kumda osemantla weFlathead Lake ukujonga le ndawo. Iikhilomitha ezingama-42 ukuya eGlacier Park, 4 mi.-Lakeside, 1.5 mi.-Somers, 10 mi.-Kalispell, 12 mi.-Big Fork, 26 mi.-Whitefish.
IGlacier National Park ikumgama oziikhilomitha ezingama-42. Thatha uhambo losuku ukuya kwenye yezona ndawo zibalaseleyo kwiiNtaba zeRocky ukuhamba, ukubona indawo, ukuthatha imifanekiso okanye i-whitewater rafting. Ungalibali ukufumana i-ayisikrimu ye-huckleberry ngelixa ulapho.
Eli gumbi lokulala li-2, igumbi lokuhlambela elinye kunye nekhaya elinomqolo limalunga ne-1600sf. Kwinqanaba eliphambili likhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlamba impahla kunye negumbi lokulala elikhulu elikhulu. Idesika ebanzi ikwakwinqanaba eliphambili. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi yaseCalifornia King, iwele elikhupha ibhedi, iTV kunye nomnyango weglasi otyibilikayo ovuleleka kwidesika. Igumbi lokuhlala linendawo yokufihla ibhedi enkulukazi kunye nedesika yokusebenza kuyo. Ngaphantsi ngamagumbi amabini ongezelelweyo. Elinye lamagumbi linebhedi enkulukazi kunye nocango oluya ngaphandle. Elinye igumbi linebhedi enebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enamawele.
I-crib ephathekayo kunye nesitulo esiphezulu okanye isitulo se-booster ziyafumaneka xa uceliwe. Umabonakude/iDVD/iCable kunye neemuvi ezibolekisayo zikwigumbi lokuhlala. Isantya esiphezulu se-intanethi kunye ne-Wi-Fi ziyafumaneka kwikhaya lonke.
Kukho izinyuko (izinyuko ezingama-23) ukusuka kwindawo yokupaka ukuya ekhaya. Kukho izinyuko ukusuka ekhaya ukuya elunxwemeni lwabucala (53 amanyathelo). Eli khaya ayilomntu wonke njengoko kukho izinyuko zokuya ekhaya kunye nezinyuko zokufika echibini. Ikhaya linendlu yangasese enye ekhaya. Ishawari kwigumbi lokuhlambela incinci. Nangona kunjalo, kukho indawo enkulu ngaphandle kwendlu yangasese kunye negumbi lokuhlambela elinobunye obungamampunge alinganayo, isinki, isipili kunye nebhafu yokuhlambela. Ngenyanga kaJuni, kaJulayi noAgasti ndinendlu yangasese ephathwayo kule ndawo ukuze kubekho enye indlu yangasese ekhoyo. Izinyuko zokuya kumagumbi asezantsi zimxinwa. Ngezi zinto zithethiweyo, ukuba ukhetha ukurenta eli khaya usazi ezi zinto, awuyi kuphoxwa ziimbono, indawo engaphambili yechibi, ibhafu yakho yabucala eshushu, umgangatho kunye nokukhululeka kwepropathi.
Sinethemba lokukubona kungekudala. Sizama ukwenza ixesha lakho lokuba kude nekhaya likhululeke kwaye lonwabe.
Indawo yosapho. Ukufikelela ngokulula kuhola wendlela ogcinwe kakuhle.
Ndifumaneka ngetekisi, ifowuni kunye ne-imeyile. Ndinomphathi wepropathi uDiane ekwafumaneka ngombhalo, umnxeba, i-imeyile kunye nomntu ukuba ufuna into.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Somers